သင့်ရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား သားသမီးတွေက သင့်ကို မနှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ချက်
Home Uncategorized သင့်ရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား သားသမီးတွေက သင့်ကို မနှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ချက်
သူတို့အားလပ်ရက်တွေမှာ အိမ်ပြန်မလာတာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ? အံ့ဩနေပါသလား? သင့်နဲ့ စာအဆက်အသွယ်တွေ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုတာတွေ ပြတ်တောက်နေတယ်/ တိတ်ဆိတ်နေတယ်လို့ ခံစားနေရသလား? သင်ကိုယ်တိုင်က ထာဝရမိတ်ဆွေဖြစ်လိုတဲ့ သင့်သားသမီးတွေဟာ သင်သတိမထားမိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရာတစ်ခုခု မှားယွင်းနေလို့လား? အမှန်တကယ်တော့ သင့်ရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား သားသမီးတွေ သင့်ကို မနှစ်သက်ရတာဟာ ဒီအကြောင်းရင်း (၇) ချက်ကြောင့်ပါ။
၁။ သင်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဗားရှင်းမျိုးဖြစ်ဖို့ တွန်းအားပေးတယ်
ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ အတိတ်မှာ ကွဲပြာခြားနားကြတဲ့ ပုံပြင်တွေရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး သင့်ကလေးတွေကို သင့်ရဲ့ ဗားရှင်းအတိုင်းဖြစ်လာစေဖို့ အတင်းအကျပ်တောင်းဆိုတယ်။ သူတို့မှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေမရှိဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ပုံပြင်တွေကို မှန်ကန်တယ်လို့ လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၂။ လက်ရှိအချိန်မှာ သူတို့ဘယ်လိုလူတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သင်မသိဘူး
ဘဝဟာ သူတို့ကို သင်မသိတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင်သိခဲ့ဖူးတဲ့ ကလေးလေးတွေနဲ့ မတူတော့ပါဘူး။ သူတို့ဘာတွေတွေးနေမယ်၊ ဘယ်လိုတွေခံစားနေရမယ်ဆိုတာ သင်သိနေဦးမယ်ဆိုရင်တောင် တထစ်ချမယုံကြည်လိုက်ပါနဲ့။
၃။ သင်ဟာ သူတို့ရဲ့ကလေးဘဝကို ကောင်းကောင်းခံစားခွင့်မပေးဘူး
သူမဟာ အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၊ သူက ဆန်ကုန်မြေလေး၊ ငပျင်းကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသလို အမျိုးကောင်းသမီးလေးတစ်ယောက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမန်ကောင်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ သူဟာ မီလျံပေါင်းများစွာကို စီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး လုပ်ငန်းတွေကို တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဆိုးရွားတဲ့ဘဝအခြေအနေအနေအထားတစ်ခုကို ကြုံနေရတာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအချိန်မှာ သူတို့ဘယ်လိုလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်းခံစားခွင့်ပေးပါ။ သင်တို့ အံ့ဩသွားရပါလိမ့်မယ်။
၄။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေကို ဦးဆောင်ခွင့်မပေးဘူး
လက်ရှိမှာ သူတို့ဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးနေပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ ဘဝလူနေမှုပုံစံ၊ ဘာသာရေး၊ လက်တွဲဖော်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနှင့် ရွေးချယ်ခွင့်တွေကို အခွင့်အရေးပေးပါ။
၅။ သူတို့ရဲ့ boundaries တွေကို လျစ်လျူရှုတယ်
သူတို့ရဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းတွေဟာ သင့်အတွက် စီးပွားရေးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သင်ဟာ သူတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို သူတို့ရဲ့ မောင်နှစ်မတွေအပါအဝင် အခြားသူတွေကိုပါ ပြောပြတယ်။ သူတို့က သင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်မလုပ်လိုက်တာနဲ့ ဆူပူလို့ မဆုံးတော့ဘူး။ ပွစိ ပွစိလုပ်လို့ မဆုံးတော့ဘူး။
၆။ သင်ပြောတဲ့စကားကိုသာ နားထောင်စေချင်ပြီး သူတို့ရဲ့စကားကိုကျ နားမထောင်ဘူး
သူတို့စကားမဆုံးခင်မှာ သင်ဖြတ်ပြောတယ်။ ဒီလို စကားဖြတ်ပြောခြင်းက ကလေးတွေကို မကောင်းတဲ့အမူအကျင့်တွေ သင်ပေးရာရောက်ပါတယ်။ စကားဖြတ်မပြောခင် သူတို့စကားလုံးတွေထဲမှာ နှစ်မြောရင်း တိတ်တဆိတ်နေပါ။ တစ်ခုခုနားမလည်ရင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ရှင်းပြဖို့ ပြောပါ။
၇။ သင်က ဘက်လိုက်တယ်
သူတို့မောင်နှစ်မတွေ အချင်းချင်းရန်ဖြစ်တဲ့အခါ တစ်ဖက်ဖက်က ရပ်တည်တာဟာ သင့်အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဘယ်သူမှန်တယ်၊ မှားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပဲထင်နေပါစေ သူတို့အချင်းချင်းပြေလည်အောင် လုပ်ပါစေ။ သင်အဖြစ်အပျက်အလုံးစုံကို မသိဘူးဆိုရင် ဝင်ရောက်ဖျန်ဖြေဖို့ ငြင်းဆန်ပါ။
Previous articleလူရှေ့မှာ စကားပြောရတာ ကြောက်တဲ့ မေမေတို့ ကလေးကို ဘယ်လိုကူညီမလဲ?
Next articleကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ မကြာခဏမှားတတ်ကြတဲ့ အမှား (၆)ခု